N-GUN JA WA: ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ - အသျှင် ကုသလ
ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ - အသျှင် ကုသလ
ဒွါရာဝတီ - အသျှင် ကုသလ(ငွေသဇင်)
" ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ " ဟူသော ဆောင်းပါးသည် ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ မည်သို့မည်ပုံ ဆက်စပ်နေသည်ကို သိရှိနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဤဆောင်းပါးကို ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
" ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ၊ မြန်မာစာနှင့် ရခိုင်လူမျိုး" ကို မည်သည့်အခါမျှ ခွဲခြား၍ ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာစာကို ရခိုင်လူမျိုးတို့က မိမိတို့၏ " ကိုယ်ပိုင်စာပေ " အနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြု ထားသောကြောင့် ဖြစ်၏။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် " မြန်မာစာ " ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသော " အက္ခရာစာပေ " ကို ရခိုင်လူမျိုးတို့က မိမိတို့၏ " ရခိုင်စာ" ဟူ၍သာ သိနေကြပါသည်။ စာပေကို ရေးသားသည့်အခါ၌ ရခိုင်စကားပြော အသုံးအနှုန်းဖြင့် ရေးသားခြင်း၊ စာပေအသုံးအနှုန်းဖြင့် ရေးသားခြင်းဟူ၍သာ ခွဲခြားထားသည်။ အက္ခရာ စာပေအနေဖြင့်မူ သည်အက္ခရာသည် စာပေဖြင့်သာ ရေးသားနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းစာအမျိုးအစားကို ရခိုင်တို့က " ရခိုင်စာ " (သို့မဟုတ်) " ရက္ခဝဏ္ဏအက္ခရာ " ဟု အမည်ပေးကာ ခေါ်ဝေါ်သမှု ပြုနေကြသည်ကို လည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမျိုးပေါင်း (၁၃၅)မျိုး ရှိကြသည့်အနက် " မြန်မာစာ အရေးအသား" ကို မည်သည့်လူမျိုးတို့က " ရှေးဦးစွာ စတင်ရေးသား " ခဲ့ကြသည်ကို လေ့လာစူးစမ်းဖို့ အချိန်တန်ပြီဟု စာရေးသူ ယူဆပါသည်။ အကယ်၍ အဖြေမှန် ထွက်ရှိခဲ့ပါလျှင်လည်း အားလုံးက သဘောထားကြီးစွာဖြင့် လက်ခံအတည်ပြု ပေးကြဖို့ကိုလည်း အနူးအညွတ် မေတ္တရပ်ခံလိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ ရှေးကရခိုင်လူမျိုးတို့တွင် "ရခိုင်စာ"၊ မွန်လူမျိုးတို့တွင် "မွန်စာနှင့် ပျူစာ"၊ ပြူ(ပျူ)လူမျိုးတို့တွင် "ပြူ(ပျူ)စာ" ဟူ၍ ကိုယ်ပိုင်စာပေ အသီးသီးရှိခဲ့ကြသည့်အနက် သည်ဆောင်ပါးစာတမ်း၌ "မွန်စာနှင့် ပျူစာ" လေ့လာဆန်းစစ်မှုမပြုတော့ဘဲ "မြန်မာစာ"ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသော "ရခိုင်စာ"ကိုသာ နှစ်ဖက်နှိုင်းယှဉ်၍ ဝေဖန်သုံးသပ် တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ဖက်နှိုင်းယှဉ်ရာ၌ နှစ်ဖက်စလုံးမှ ထင်ရှားပြီး ခိုင်မာသော သမိုင်းဆိုင်ရာ ခေတ်ပြိုင် အထောက်အထားတစ်ခုစီကိုသာ ထုတ်နုတ်၍ ရေးသားတင်ပြသွားပါမည်။ အထောက်အထားရှိတိုင်း အကျယ်တ၀င့်တင်ပြဖို့ဆိုသည်မှာ အခြေအနေမပေးသေးသဖြင့် မဖြစ်နိုင်သေးချေ။
ရခိုင်နှင့်မြန်မာ ခေတ်ပြိုင်မှုကို ရှာကြည့်ခြင်း " မြန်မာစာပေ " ကို ရေးသားနေကြသည့် " ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ခေတ်ပြိုင်အချိန်ကာလကို ရှာကြည့်သော် ဤသို့တွေ့ရ၏။ " ပု၊ ပင်း၊ အင်း၊ တောင်၊ ညောင်ရမ်းနောင်၊ ကုန်ဘောင် ခုနှစ်ဆက်" ဟူသော သင်္ကေတ သံပေါက် ကဗျာအရ မြန်မာလူမျိုးတို့တွင် ပုဂံခေတ်၊ ပင်းယခေတ်၊ အင်းဝခေတ်၊ တောင်ငူခေတ်၊ ညောင်ရမ်းခေတ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ် ဟူ၍ ခေတ် (၆)ခေတ် ထွန်းကားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ရခိုင်လူမျိုးတို့တွင်လည်း ဒွါရာဝတီခေတ်၊ ရှေးဝေသာလီခေတ်၊ ဓညဝတီ (ပ၊ဒု၊တ)ခေတ်၊ ဝေသာလီကျောက်လှေကားခေတ်၊ လေးမြို့ခေတ်၊ မြောက်ဦး (ပ၊ဒု၊တ)ခေတ်ဟူ၍ ခေတ် (၆)ခေတ် ထွန်း ကားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် အချိန်ကာလကြာမြင့်ပုံခြင်းတော့ တူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ယင်းတို့အနက် မြန်မာတို့၏ ပုဂံခေတ်နှင့် ရခိုင်တို့၏ လေးမြို့ခေတ်မှာ ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ကြ၏။ မြန်မာတို့ဘက်က ပုဂံခေတ်၏ ထင်ရှားသော " ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ (ခေါ်) မြစေတီကျောက်စာ" ကို ခိုင်မာသော အထောက်အထားအဖြစ် တင်ပြမှာဖြစ်ပြီး၊ ရခိုင်တို့ဘက်က စစ်တွေမြို့၊ ခေါင်းလောင်းကျောင်းတိုက်ရှိ လေးမြို့ခေတ် "ရခိုင်ဘုရင် မင်းရင်ဖြူ " သွန်းလုပ်ပူဇော်ခဲ့သော ဘုရား၏ " စမ္မခဏ်ကမ္ပည်းစာ " ကို ခိုင်မာသော အထောက်အထားအနေဖြင့် တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာတို့၏ ပုဂံခေတ် " ကြာ၊ အိုး၊ အံ၊ ပုဂံတည်" ဟူသော ဆောင်ပုဒ်အရ ပျဉ်ပြားမင်း (အေဒီ ၈၄၆ မှ ၈၇၈ ထိ) သည် ယခုလက်ရှိ ပုဂံမြို့ကို တည်ချိန်မှာ ကောဇာ ၂၁၁ ခု၊ ခရစ်အေဒီ ၈၄၉ ခု ဖြစ်၏။ ပုဂံပျက်ချိန်မှာကား " စောမွန်နစ်မင်း " (အေဒီ ၁၃၂၅ မှ ၁၃၆၉ ) လက်ထက်တွင် ဖြစ်လေ၏။
ပျဉ်ပြားမင်းသည် ပုဂံမြို့ကိုတည်ဆောက်နေသည့်အချိန်တွင် ပုဂံ၌ " ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ" မရောက်ရှိသေး။ အလားတူ " မြန်မာစာ" ဟူသော စာပေးရေးသားမှု အတတ်ပညာသည်လည်း လုံးဝမရှိသေး သည်ကို တွေ့ရ၏။
ပုဂံမြို့၌ ပျဉ်ပြားမင်းလွန်ပြီးနောက် တန်နက်မင်း (အေဒီ ၈၇၈-၉၀၆)၊ ၎င်းနောက် စလေငခွေးမင်း (အေဒီ ၉၀၆-၉၁၅)၊ ၎င်းနောက် စလေငခွေးမင်း (အေဒီ ၉၁၅-၉၃၁)၊ ၎င်းနောက် ညောင်ဦးစောရဟန်းမင်း (တောင်သူကြီးမင်း) (အေဒီ ၉၃၁-၉၆၄)၊ ၎င်းနောက် ကွမ်းဆော်ကြောင်ဖြူမင်း (အေဒီ ၉၆၄-၉၆၈)၊ ၎င်းနောက် ကျည်စိုးမင်း (အေဒီ ၉၈၆-၉၉၂)၊ ၎င်းနောက် စုက္ကတေးမင်း (အေဒီ ၉၉၂-၁၀၁၇)၊ ၎င်းနောက် အနော်ရထာမင်း (အေဒီ ၁၀၄၄-၁၀၇၇) လက်ထက်တွင်မှ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာကို မွန်ရဟန်းတော် ရှင်အရဟံ၏ အကူအညီ ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ရ၏။ ယင်းအချိန်အထိ " ပုဂံ" ၌ " မြန်မာစာ " ဟူသော အရေးအသား မရှိသေးချေ။ မွန်လူမျိုးတို့၏ စာပေကိုသာ မွန်ပညာရှိများ၏ အကူအညီဖြင့် ရေးသားနေကြရလေသည်။
အနော်ရထာမင်း လွန်ပြီးနောက် စောလူးမင်း (အေဒီိ ၁၀၇၇-၁၀၈၄)၊ ၎င်းနောက် ကျန်စစ်သား မင်း (အေဒီ ၁၀၈၄-၁၁၁၃) လက်ထက်တွင် " ဇေယျခေတ္တရာ" အမည်ရှိသော သားတော် " ရာဇကုမာရ်" သည် ပုဂံ၌ " မြစေတီဘုရား" ကို တည်၏။ မြစေတီဘုရား၌ သူ၏ကုသိုလ်တော် မှတ်တမ်းကို " ပါဠိ၊ မြန်မာ၊ မွန်၊ ပျူ " ဟူ၍ ဘာသာလေးမျိုးဖြင့် ကမ္ပည်းစာ ရေးထိုးစေခဲ့ပါသည်။ ယင်းမြစေတီဘုရား ကျောက်စာကား ပုဂံခေတ် ကျောက်စာများအနက် " ရှေးအကျဆုံးကျောက်စာ" ဖြစ်၏။ မြစေတီကျောက်စာကို သာသနာတော် သက္ကရာဇ် ၁၆၅၇ ခု၊ ကောဇာ ၄၇၅ ခု (ခရစ်အေဒီ ၁၁၁၃ ခု)တွင် ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယင်းအချိန်ထိ ပုဂံ၌ " ပျူလူမျိုး" တို့ ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရ၏။
ရခိုင်တို့၏ လေးမြို့ခေတ် ရခိုင်တုိ့၏ လေးမြို့ခေတ်သည် အေဒီ ၈၁၈ မှ ၁၄၃၀ ထိ ကြာမြင့်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရ၏။ လေးမြို့ခေတ် ဆိုသည်မှာ အဉ္စနနဒီမြစ်၏ ဝဲယာ၌ ပဉ္စာမြို့၊ ပုရိန်မြို့၊ နေရဉ္စရာတောင်ငူမြို့၊ လောင်းကြက်မြို့ဟူ၍ မြို့လေးမြို့ တည်ရှိခဲ့သည်ကို အကြောင်းပြု၍ " လေးမြို့ခေတ်" ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာတို့၏ " ပျဉ်ပြားမင်း" သည် ယခုလက်ရှိ " ပုဂံမြို့"ကို မတည်ဆောက်ရသေးမီ (၃၁)နှစ်အလိုက လေးမြို့ခေတ် ရခိုင်ဘုရင် " ခေတ္တသင်မင်း" သည် " ပဉ္စာမြို့" ကို သာသနာ ၁၃၆၂ ခု၊ ကောဇာ ၁၈၀ ခု၊ (အေဒီ ၈၁၈) တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး ဖြစ်နေပါသည်။
ရခိုင်တို့၏ လေးမြို့ခေတ် " ခေတ္တ သင်မင်း" လက်ထက်တွင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားနေမှု ကို မဆိုထားဘိ လေးမြို့ခေတ်၏ အထက်က ဝေသာလီ ကျောက်လှေကားခေတ် (အေဒီ ၃၂၇ မှ ၈၁၈ ထိ) တွင် လည်းကောင်း၊ တတိယ ဓညဝတီခေတ် ( ဘီစီ ၅၆၉ မှ အေဒီ ၃၂၆ ထိ ) တွင်လည်းကောင်း၊ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ပအတူ စာပေယဉ်ကျေးမှု အနုပညာများ ထွန်းကားလျှက် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ယုံမှားသံသယ မရှိ ခိုင်မာသော အထောက်အထားများက သက်သေပြလျှက် ရှိနေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းတို့အနက် လေးမြို့ခေတ် (အေဒီ ၈၁၈ မှ ၁၄၃၀ ထိ ) ပဉ္စာမြို့တည် " ခေတ္တ သင်မင်း" မှ (၃) ဆက်မြောက် " ဘုရင်မင်းရင်ဖြူ" လက်ထက် (အေဒီ ၈၄၃-၈၇၃ ထိ) အေဒီ ၈၄၇ တွင် သွန်းလုပ်ပူဇော်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ( ဥာဏ်တော်အမြင့် ၁ ပေ ၂.၃ လက်မ၊ ယခုအခါ စစ်တွေမြို့၊ ခေါင်းလောင်း ကျောင်းတိုက် တွင် ကိန်းဝပ်လျှက် ရှိသည်။) ၏ " စမ္မခဏ် ကမ္ပည်းစာ" ကို တင်ပြလိုပါသည်။ ကျန်စာပေ အထောက်အထား များစွာ ရှိကြသော်လည်း စာရေးသူအနေဖြင့် ယင်းဘုရား၌ ပါရှိသော " စမ္မခဏ် ကမ္ပည်းစာ" ကိုသာ ရခိုင်စာပေ ဘက်က ခိုင်မာသော အထောက်အထားတစ်ခု အနေဖြင့် တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားဆင်းတုတော် စမ္မခဏ်ကမ္ပည်းစာ အဆိုပါဘုရား၏ စမ္မခဏ်ကမ္ပည်းစာမှာ ယခုခေတ် " မြန်မာစာ" ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသော " ရခိုင်စာ" အရေးအသားဖြင့် ရေးထိုးမှတ်တမ်းတင်ထားသည်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရသည်။
" သက္ကရာဇ် ၉၊ ကဆုန်လဆန်း ၆ ရက်၊ တနင်္လာ ၅ နာရီကျော်..... ရောက်.......... ကြီးသွန်းအဲသည်။ ငင်္မင်္ရဖြူကောင်းမှု ဘုရားပဉ္စလောဟာပြီးပြည့်စုံသည်၊ ဘုရားပြုသှော အကျိုဝ်အားဖြင့် ဘုရားမချွတ်ဖြစ်စေသှော .........။ " ဟူ၍ ရေးထိုးထားပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါဘုရား၏ "စမ္မခဏ်ကမ္ပည်းစာ"ကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ဖတ်ရှုသော် အောက်ပါအ တိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
" သက္ကရာဇ် ၂၀၉၊ ကဆုန်လဆန်း ၆ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ ၅ နာရီကျော်သော (အချိန်) ရောက် (သောအခါ) ကြေးသွန်းအပ်သည်။ ငါမင်းရင်ဖြူ ကောင်းမှုဘုရားကို ပဉ္စလောဟာဖြင့် (သွန်းလုပ်) ပြီးပြည့်စုံ သည်။ ဘုရားပြုသော အကျိုးအားဖြင့် ဘုရားမချွတ် ဖြစ်စေသော်။ " ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
လေးမြို့ခေတ် ရခိုင်ဘုရင် မင်းရင်ဖြူသည် အထက်ဖော်ပြပါ ဘုရား၏ " စမ္မခဏ် ကမ္ပည်းစာ" ကို " ရက္ခဝဏ္ဏ အက္ခရာ- ရခိုင်စာ" ဖြင့် ရေးထိုးခဲ့သောနှစ်မှာ ကောဇာ ၂၀၉ ခု၊ ခရစ်အေဒီ ၈၄၇ ခုဖြစ်ရာ မြန်မာတို့ ယခုလက်ရှိ ပုဂံမြို့ကို မတည်ဆောက်ရသေးမီ (၂)နှစ်အလိုက ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ " ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာ (ခေါ်) မြစေတီ ကျောက်စာ" သည် ယင်းအချိန်၌ ရှိဖို့မဆိုထားနှင့် " ပုဂံမြို့" ပင်မရှိသေးသောကြောင့် " မြန်မာစာပေ" အရေးအသားမှာလည်း မြန်မာတို့အနေဖြင့် " အိမ်မက် တောင်မက်ဖို့" မလွယ်ကူသေးချေ။
မြန်မာလူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ မြန်မာသမိုင်းဆရာများက မြန်မာသည် " ပျူလူမျိုး" က ဆင်းသက်လာသူများဟု ခံယူထားကြ၏။ ယင်းသို့ဆိုလျှင် အဘယ်ကြောင့် မြန်မာတို့သည် " ပျူစာ"ကို မိခင်စာပေအဖြစ် ရပ်တည်အောင် မဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါသနည်း ? ဟု မေးစရာ ရှိနေပါသည်။ ယခုအခါ ပျူလူမျိုးနှင့် ပျူစာပေမှာ မြန်မာ့မြေမျက်နှာ ပေါ်က လုံးဝဆိတ်သုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားကြပြီ ဖြစ်၏။
အချို့သမိုင်းဆရာများက မြန်မာစာသည် " မွန်စာ"က ဆင်းသက်လာသောစာဟု ကြံဆပြန်၏။ ထိုသို့ ဆိုလျှင်လည်း အဘယ်ကြောင့် မြန်မာတို့သည် " မွန်စာ" ကို နိုင်ငံသုံးစာပေအဖြစ် ရပ်တည်အောင် မဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပါသနည်း? ဟု မေးစရာတွေ အများကြီးရှိနေပါသည်။
အမှန်က " ပျူစာ" သည် ပျူလူမျိုးတို့နှင့်သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပြီး၊ " မွန်စာ"သည်လည်း မွန်လူမျိုးတို့နှင့်သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေသော စာပေဖြစ်ကြောင်းလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရပေသည်။
ယနေ့ မျက်မှောက်ခေတ် " မြန်မာစာ" ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသော " ရခိုင်စာ"သည်လည်း ရခိုင်လူမျိုးတို့နှင့်သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခဲ့ကြသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့သည် ကိုယ့်စာပေကို ခေတ်အဆက်ဆက် တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လာခဲ့ကြသည်မှာ ခေတ်တိုင်းခေတ်တိုင်းတွင် ပေါ်ထွန်းခဲ့သော " ရခိုင် စာပေ အထောက်အထားများ " က သက်သေပြုလျက် ရှိနေပေတော့သည်။
မြစေတီကျောက်စာ၌ ပါရှိသော " မြန်မာစာ" ကို မြန်မာသမိုင်းဆရာများက " ပျူစာက ဆင်းသက်လာ သောစာ" ဟု ထင်မြင်ချက်ပေးကြ၏။ အလားတူ အချို့သမိုင်းဆရာများက " မွန်စာက ဆင်းသက်လာသောစာ" ဟူ၍လည်း ထင်မြင်ချက်ပေးကြပြန်၏။ အမှန်က ယင်း " ပျူစာနှင့် မွန်စာ" နှစ်မျိုးစလုံးသည်ပင်လျှင် မြစေတီ ကျောက်စာ၌ ပါရှိနေပြီး ဖြစ်သောကြောင့် ယင်းစာနှစ်မျိုးက ဆင်းသက်လာသောစာဟု သတ်မှတ်နေကြခြင်း သည် လုံးဝယုတ္တိမရှိချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စာပေတို့မည်သည် အချိန်ကာလတစ်ခုတည်း၌ နေ့ချင်းည ချင်း ပြောင်းလဲရိုးထုံးစံမရှိသောကြောင့်တည်း။ ပြောင်းလဲဖို့ဆိုသည်မှာလည်း ခေတ်ကာလ အတော်ကြာမြင့် အောင် စောင့်ဆိုင်းရပေလိမ့်မည်။ မြစေတီကျောက်စာ (မြန်မာ)သည် ပျူစာနှင့် မွန်စာက ဆင်းသက်လာသော စာမဟုတ်ကြောင်းကို " မြစေတီကျောက်စာ" ကပင်လျှင် အခိုင်လုံဆုံး သက်သေပြုလျှက် ရှိနေပေတော့သည်။
အမှန်က " မြစေတ်ီကျောက်စာ" ၌ ပါရှိသော " မြန်မာစာ" သည် " ပြောင်းလဲလာသောစာ" မဟုတ်ဘဲ " ရောက်ရှိလာသောစာ" ဟုဆိုမှ သဘာဝယုတ္တိကျမည်ကို မြန်မာပညာရှိတို့ သိရှိနိုင်ကြပါလျှက် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေခဲ့ကြပြီး အဖြစ်မှန်ကို ရေငုံနှုတ်ပိတ် လုပ်နေခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရ၏။
အဖြစ်မှန်ကို သိရှိလိုပါက လေးမြို့ခေတ်၊ ပဉ္စာမြို့(၁၂)ဆက်မြောက် မင်းဘီလူးကို အေဒီ ၁၀၆၈ တွင် " ဝရောင်းငှက် အသင်္ခယာ" အမတ်က လုပ်ကြံသဖြင့် ကွယ်လွန်သည်။ မင်းဘီလူး၏ သားဖြစ်သူ အိမ်ရှေ့မင်း သား " မင်းရဲဘယ" သည် မိဖုရား " စောပေါက်ညို" (ပေါက်ညိုမြ) နှင့်အတူ ရခိုင်ပညာရှိအမတ် အချို့လိုက်ပါ လျှက် " ဘူးရွက် မညိုးလမ်း" က အရှေ့ပုဂံပြည်သို့ ထွက်ပြေးကာ " အနော်ရထာမင်း" ထံ ခိုလှုံခဲ့ရသည်။ အဆို ပါ မင်းရဲဘယမိသားစုတို့သည် ပုဂံပြည်၌ နှစ်ပေါင်း (၃၅)နှစ်ခန့် ကြာမြင့်အောင် အမှုတော်ထမ်းရွက်ကာ နေ ထိုင်ခဲ့ကြရသော သမိုင်းကြောင်းကိုလည်းကောင်း။
ပုဂံမင်းအနော်ရထာအား " ရခိုင်ဝေသာလီ" က " ပဉ္စကလျာဏီ မင်းသမီး" ကို ဆက်သရာတွင် " ကျန် စစ်သား" ကို ရသည်ဟူသော သမိုင်းကြောင်းကို လည်းကောင်း။ ကျန်စစ်သားသည် မြေးတော်အလောင်းစည်သူကို ပုဂံထီးနန်းကို ပေးအပ်ပြီး " ဇေယျခေတ္တရာ" အမည် ဖြင့် သားတော် ရာဇကုမာရ်မင်းသားကို " ဓညဝတီနှင့် တောင်စဉ်ခုနှစ်ခရိုင်" ( မြန်မာ ရာဇဝင်အလို)ကို စဉ်းစား စေခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းကို လည်းကောင်း။
ပုံဂံမင်းတို့အထံ၌ ရခိုင်သားများ အမှုတော်ထမ်းရွက်ခဲ့ကြပြီး အချို့က ဘုရားအလှူ့ဒကာများအဖြစ် ခံယူကာ မြန်မာတို့၏ နယ်မြေ၌ ရှိနေခဲ့ကြသည်ဟူသော သမိုင်းကြောင်းကို လည်းကောင်း။ မြန်မာလူမျိုးတို့ကို ရခိုင်လူမျိုးတို့က " အောက်သား" ဟု နာမည်ပေးကာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ ကြသည့် သမိုင်းကြောင်းကို လည်းကောင်း။ " ရဟန္တာထွေး (ခေါ် ) အသျှင်ဒိဗ္ဗစက္ခု" အမည်ရှိသော ရခိုင်တို့ ဝေသာလီက ရဟန္တာအသျှင်သူမြတ် သည် ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ " မဟိန္ဒပါလ မထေရ်မြတ်" ၏ စေလွှတ်ချက်အရ ပင်းယမြို့သို့ ကြွရောက်၍ သာသနာ ပြုခဲ့ရသော သမိုင်းကြောင်းကိုလည်းကောင်း ချန်လှပ်၍ ထားကြမည်ဆိုပါက မည်သည့်အခါမျှ အဖြေမှန်ပေါ် ပေါက်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ ပုဂံခေတ် ကျောက်စာများ၌ ပါရှိနေသော အချို့စကားလုံးမျာသည် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ နေ့စဉ်သုံး ဝေါဟာ ရများ ဖြစ်နေကြောင်း အောက်ပါစကားလုံးများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
(၁) ကြာသပတိယ်နိယ်၊ (၂) သုကြ်ာနိယ်၊ (၃) လှိယ်၊ (၄) ရိယ်မှုတ်၊ (၅) အတုမဟိသော၊ (၆) ခြုယ်မ၊ (၇) ခြုပ်မ၊ (၈) အစ်ကို၊ (၉) အစ်မ၊ (၁၀) ပန်စင်၊ (၁၁) ကခြီယ်သည်၊ (၁၂) ပညာမဟိယ်သော၊ (၁၃) သစ္စာ မဟိယ်သော၊ (၁၄) အလှူပိယ်လိုဝ်သော၊ (၁၅) သင်္ဃာတိုဝ်၊ (၁၆) ဤယ်သူ၊ (၁၇) ပတ္တမြားစာတီတိုဝ်၊ (၁၈) လှူခ၏၊ (၁၉) ခြီယ်လက်၊ (၂၀) ခြိယ်ဆိယ်ရိယ်၊ (၂၁) လက်ဆိယ်ရိယ်၊ (၂၂) မပ္လုရကြောင်ဆိုဖိလတ်၊ (၂၃) နိယ်ရလိယ်၏၊ (၂၄) အသရိယ်ဟိသော၊ (၂၅) ခရိုန် စသော ဝေါဟာရများကို ယနေ့ခေတ် မြန်မာတို့ ပြောဆို နေကြပါသေးသလား ? ဟု မေးလျှင် ပြောဖို့မဆိုထားနှင့် အဓိပ္ပါယ်ကို သိရှိအောင် မနည်းကြိုးစားကြရမည် ဟု ထင်ပါသည်။
အဓိပ္ပါယ်ကို သိသည့်တိုင်အောင် အသံထွက်ကို ပီပီသသ ထွက်ရှိနိုင်ဖို့က ပို၍ခက်ပေလိမ့်မည်။ အလားတူ ရခိုင်ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများသည် ပုဂံခေတ်ကျောက်စာများ၌ များစွာကျန်ရှိနေသေးသည်ကို တွေ့ရ၏။
ခရစ်အေဒီ ၁၁၁၃ ခုတွင် ရေးထိုးခဲ့သော မြန်မာတို့၏ ရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည့် မြစေတီကျောက်စာထက် လေးမြို့ခေတ်၊ အေဒီ ၈၄၇ ခုတွင် ရခိုင်ဘုရင် မင်းရင်ဖြူ သွန်းလုပ်ပူဇော်ခဲ့သော ကောင်းမှုတော်ဘုရား၏ စမ္မခဏ်း ကမ္ပည်းစာက နှစ်ပေါင်း (၂၆၆) နှစ်စော၍ ရှေးကျနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် " မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာစာအရေးအသားကို မည်သည့်လူမျိုးတို့က ရှေးဦးစွာ စတင်ရေး သားခဲ့ကြပါသနည်း။ " ဟူသော အမေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် ဤဆောင်းပါးစာတမ်းက အထိုက်အလျောက် အဖြေပေး နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ဆိုရသော် " ရခိုင်လူမျိုးနှင့် မြန်မာစာ" မှာ မည်သည့်အခါမျှ ခွဲခြား၍ ရလိမ့်မည် မဟုတ်။ စကားပြောဟန် ရေးနည်းနှင့် စာအသုံးရေးနည်းသာ ခြားနားချက်ရှိနေသည်။ စာပေအက္ခရာမှာ အတူ တူပင်တည်း။ သို့ဖြစ်၍ ယနေ့မျက်မှောက်ခေတ် " မြန်မာစာ" ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသော " ရခိုင်စာ" ကို အကြွင်းမဲ့ ခံယူထားကြသည်ကို သုတေသနပြုကာ ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပေသည်။
" ရခိုင်စာပေ" အဖြစ်မှန် ပေါ်ပေါက်ပါစေ။
၁။ မြစေတီကျောက်စာ၊ လှသမိန်။
၂။ ပုဂံခေတ် နိုင်ငံရေးသမိုင်း၊ ဒေါက်တာ သန်းထွန်း။
၃။ တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံဘယ်ပြေးမလဲ၊ ဒေါက်တာ သန်းထွန်း။
၄။ ကျောင်းသုံး မြန်မာရာဇဝင်၊ ဦးဘသန်း။
၅။ မင်းရင်ဖြူ ကောင်းမှုတော်ဘုရား စမ္မခဏ် ကမ္ပည်းစာ။
၆။ သာသနာလင်္ကာရ စာတမ်း ( မူဟောင်း )၊ မဟာဓမ္မ သင်္ကြံအမတ်။
၇။ ရွှေဘုံနိဒါန်း၊ ဇေယသင်္ခယာ။
၈။ ဒွါရာဝတီ - အသျှင်ကုသလ မှတ်စု။
Posted by Lazaru at 1:27 PM